M/weyne Shariif & R/wasaare Gaas oo mawaaqif kala duwan ka istaagay duullaanka Kenya. – Radio Daljir
Muqdisho, Oct 25 – Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda FKMG ah ee Soomaaliya iyo dalka Kenya ay iska kaashan doonaan sidii ay u jabin lahaayeen kooxda Alshabab.
Cabdiwali Maxamed Cali-Gaas oo waraysi gaar ah siiyay wargayska The Star ee ka soo baxa magaalada Toronto ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisa iyo tan Kenya ay u arkaan kooxda Alshabab codow wadaag ah oo ay khasab tahay in ay iska kaashadaan jabintiisa.
Mudane Gaas ayaa ka jawaabayay duullaanka ay Keyna ku soo qaadday koonfurta Soomaaliya, waxana uu si adag u tilmaamay in Kenya lagu khasbay weerarkan kadib markii weeraro is-daba joog ah oo ay ku dhinteen dalxiisayaal ajnabi ah iyo ciidan Kenyan ahba ay waqooyiga dalka Kenya ku qaadeen kooxda Ashabab.
Ra’iisul-wasaaruhu waxa uu sheegay in kabadan 90% ay dalxiisayaashii joojiyeen safarradii u qorsheeysnaa in ay ku tagaan dalka Kenya, gaar ahaan magaalooyinka xeebta ku yaal ee waqooyiga dalkaas, taasoo dhabar-jab ku ah dhaqaalaha dalka Kenya oo ku dhisan dalxiiska.
Hadalka Ra’iisul-wasaaraha ayaa soo baxaya xilli uu madaxwaynaha dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku tilmaamay weerarka Kenya duullaan ay ku soo qaaday dhulka Soomaaliya oo ayan dawladdiisu waxba kala socon.
Mawaaqifta kala duwan ee ka soo kala yeeray madaxda sare ee federaalka kuna aaddan xaalad ammaan oo xasaasi ah ayaa noqonaysa khilaafkii ugu horeeyay ee labadan mas’uul tan iyo intii uu madaxwaynuhu magacaabay ra’iisul-wasaare Gaas. Khilaafka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ah mid mar walba la iska fisho, waxana muuqata in ay arrintani dhirbaaxo ku tahay dadaalladii loogu jiray in la dhaqan-galiyo heshiiskii lagu soo afjari lahaa xaaladda ku-meel-gaarka ah isla markaana loogu gudbi lahaa hannaansiyaasadeed oo buuxa.
Warar uu Radio Daljir goor dhow ka helay ilo ku dhowdhow madaxtooyada ayaa sheegaya in labada mas’uul ay caawa galeen shir dag-dag ah oo uu waliba codsaday madaxwayne Shariif, kaasoo sida la filayo uga hadleen sidii ay mowqif midaysan uga gaari lahaayeen is-maan-dhaafkan cusub ee xasaasiga ah.
Dhammaan khilaafyadii hore inta badan soo dhex-mari jiray madaxda federaalka ayaa kulligood ku dhamaaday in uu meesha ka baxo labada mas’uul ee ugu sareeya midkood.
Marka laga reebo khilaafkii madaxwayne Cabdullaahi Yuusuf iyo ra’iisul-wasaare Nuur Xasan Xuseen oo uu meesha kaga baxay madaxwaynaha ayaa inta kale waxa ay galaafteen ra’iisul-wasaarayaashii.
Madaxda haatan jooga ayaa ka dhashay heshiis madaxdu ku gaareen dalka Ugandha kaasoo ay qodobadiisu kamid ahaayeen in ayan madaxdu is-khilaafi karin, haddii ay taa dhacdana beesha caalamku ay qaadi doonaan tallaabooyin cunaqabatayn ah oo ka dhan ah siyaasiyiinta.